Daawo Sawirro: Ciidanka Xoogga dalka oo Gurmadkii ugu horreeyay la gaarsiiyay Baledweyne | HalQaran.com
Daawo Sawirro: Ciidanka Xoogga dalka oo Gurmadkii ugu horreeyay la gaarsiiyay Baledweyne
Baledweyne (Halqaran.com) – Ciidanka Xoogga Dalka oo u istaagay ka qayb qaadasha gurmadka loo fidinayo shacabka ku barakacay fatahadaha Magaalada Baledweyne ayaa gelinkii dambe Jimcihii maanta gargaarkii ugu horeeyay geeyay duleedka magaaladaasi.
Gargaarkan oo ah wejiga koobaad ee Gurmadka Ciidamada Qalabka Sida ayaa gawaarida waaweyn ee xamuulka lagu geeyay duleedka Magaalada Baledweyne, si loogu qaybiyo shacabka ku dhibaateysan duleedka magaaladaasi.
Gargaarka oo ka yimid dhinaca Galmudug ayaa waxaa bixiyay Saraakiisha iyo Ciidanka Xoogga Dalka qaybtooda Galmudug, kuwaa oo loogu yeero Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka.
Qoraal ka soo baxay Taliska Qaybta 21aad ayaa lagu sheegay in gargaarkaasi loo qaybin doono dadka nolosha adag ku haysato duleedka Magaalada Baledweyne.
“Gargaarkan waxaa sida ugu dhaqsiyaha badan loogu qaybin doonnaa Shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan duleedka Baledweyne.” Ayaa lagu yiri qoraalka Taliska Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka.
Ugu dambeyn, magaalooyinka Dalka ayaa waxaa ka soconaya barnaamijyo kala duwan oo ujeedkoodu uu yahay in loogu gurmado shacabka ay fatahaaduhu ku khasbeen in ay guryahoodu ka cararaan.